ဘုရင်ဂျော့ဒုတိယအနန္တသူ၏အစဉ်အလာဂုဏ်ပြုသောဧကရာဇ်၏မွေးနေ့တွင် 1748. ထိုကတည်းက, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိဂုဏ်မွေးနေ့၎င်း၏တေး. သို့သျောလညျး, သူတို့ပြောင်းလဲကြပြီရက်စွဲအကြိမ်အနည်းငယ်. အခုသူတို့ကျင်းပ ဘုရင်မကြီးရဲ့ တရားဝင်မွေးနေ့ ဒုတိယအပေါ်စနေနေ့ဇွန်လ၏. သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်အတွက်အချိန်ကာလအတွင်း, သင်မြင်ခြင်းငှါအဘုရင်မကြီးရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနား. အခမ္းအနားအစအဖြစ်လူသိများသည် Trooping အရောင်.
အီတလီနွှဲမိမိတို့နိုင်ငံအပေါ်ဇွန်လ ၂, သောအစဉ်အလာသူတို့တွင်စတင်ခဲ့ 1946. မဲေ၏မျက်နှာသာအတွက်ဖျက်သိမ်းအမျက်, အီတလီလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်. သို့သျောလညျး, သူတို့ပြောင်းရွှေ့ပွဲကျင်းပရန်နေ့စွဲပထမဦးဆုံးစနေနေ့ဇွန်လအတွက်သာ 1977. သူတို့တွေဟာသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရက်စွဲအပေါ်အနုတ်လက္ခဏာကိုရောင်ပြန်ဟပ်သူတို့၏စီးပွားရေး. သူတို့သာမယ္ဆိုျအဟောင်းအတွက်ရက်စွဲ 2001. ရှိပါတယ် ပဒေသာပွဲ သက်သေခံရန်အီတလီနိုင်ငံတလျှောက်လုံးတွင်သမ္မတနိုင်ငံနေ့က. အရှိဆုံးအံ့မခန်းမျက်မှောက်ကတော့အားဖြင့်ခုံးကျော်ဖြစ်ပါတယ် အီတလီလေတပ်.